Qilaafka soo kala dhax galay falis abdi iyo shiine xagee ayuu gaaray? Daawo Video - iftineducation.com
Qilaafka soo kala dhax galay falis abdi iyo shiine xagee ayuu gaaray? Daawo Video
iftineducation.com – Fanaanada caanka ah Falis Cabdi ee kooxda waayaha cusub ayaa shaaca ka qaaday in xiligaan kooxda waayaha cusub u baahaneyn fanaanad ku soo biirta isla markaana iyadu buuxin karto boos waliba oo dumar oo waayaha cuusb ah .
Falis ayaa sheegtay in marnaba aysan ogalaan doonin in madaxa Waayaha Cusub ahna sayga ay u dhaxdo ee Shine Akhyaar aysan marnaba ka ogalaan doonin in dumar uu u ogaalado in ay ku sii biiraan kooxda oo ay ku heesto magaca waayaha cusub.
Arintaan ayaa imaaneysa xilli Shiine Akhyar fanaanad cusub uu ku soo daray kooxda taas oo hal hees dhawaan qaaday ka dib markii in muddo ah waayaha cusub laga waayay fanaanad dumar laga soo bilaabo xiliyadii aysan heli jirin qandaraasyada ee 2008-kii .
Warar ayaa sheegaya in Falis uu galay hinaaso ka dib markii suuqa ay ka maqashay in ninkeeda iyo fanaanadaas ku cusub waayaha cusub ay qaataan kulamo ka banaanka ah shaqada (is gaad gaad Ah)
Asxaab ku dhaw waayaha cusub ayaa Hiiraanka.com u sheegay in arinta sidaas aheyn oo ay Falis diidan tahay in fanaanad ka cod macaan kooxda soo gasho taas oo awood u leh in ay live u heesto halka Falis kaliya ay ku heesi karto playback taasi oo keeni karta in booska laga galo.
Daawo Hooyo Soomaaliyeed oo ka sheekeenaysa dhib qabsaday & Curadkeeda oo Xashiishad lagu xiray (Daawo Muuqaal+Warbixin).